Tsihy be lambanana – Malag@sy Miray
« Tsihy be lambanana ny ambanilanitra »
Mbola manohy ilay « ny olombelona fandrin-drano… » ity. Izany hoe mitovy hevitra aminy.
Ny « Tsihy » dia tsy inona fa ilay herana voarary sy natambatra ho iray. Ampiasaina indrindra ho fipetrahana (toy ireny eny amin’ny toram-pasika rehefa mitanin’andro ireny, ohatra) na ataon’ny olona sasany ambany kidoro raha tsy misy ny fandriana hazo. Eo koa ilay fampiasan’ny Malagasy azy amin’ny andro famadihana, hibatany sy hilanjany ny razana mandritry ny famonosana.
Rehefa velarina tsara tokoa izy iny dia mitsotra manaraka tsara ny fandrin-drano ihany koa (raha tsy hoe toerana kisilasila angaha no ametrahanao azy). Tsy misy avo sy iva raha tsara rary. Avy amin’izany no nitsirian’ny hevitra tao amin’ny Ntaolo hampiasa azy ho fanoharana momba ny fitoviana.
dikanteny: Ceux qui sont sous le ciel (les hommes) forment une grande natte (i-e sont solidaires)
Par Avylavitra 6 Commentaires
6 novembre 2007 à 11:03
Ils sont d’une grande sagesse les malgaches, quand même … 🙂
7 novembre 2007 à 15:12
Vola> mbola betsaka no havoakako eto fa dia mirary anareo hazoto hijery sy hamaky, ary indrindra hitondra izay mba hevitrareo momba azy ireny
7 novembre 2007 à 17:31
MAhagaga mihitsy ny Ntaolo fa tena mandinika sy filozofa tanteraka.
Izaho aloha dia tena liana amin’ity resaka voambolana (moa izany?) ity e.
Miandry « avylavitra » zany e
Misy fanamarihana kely Tompoko [objection votre honneur] !
Ilay ohabolana voalohany dia mikasika ny olombelona « rehetra » ilay faharoa kosa mikasika ny « ambanilanitra ». Tsy tena sahala ireo sa izaho no diso ? 😉
Tomavana> ny antsoina hoe « Ambanilanitra » dia tsy inona fa ny Olombelona rehetra ihany k’ah! Toy ny mpanjaka rehefa nandalo fahiny, dia niondrika nitsaoka (nanome voninahitra) azy ny Ambanilanitra, izany hoe ny vahoaka
i am from here madagascar i this is above my name and i want to know the cultural malgache and i has been little things abote cultural Malgceh